Mon Petit Avatar: Batu Caves
Posted by Mon Petit Avatar at 10:50 AM
If you have enough time, you should also visit to an Orang Asli Museum (a museum displayed all about indigenous people) and to Royal Selangor Pewter,amodern yet interesting factory where pewter products are skillfully hand manufactured of course it is alsoamust place to visit Batik factory where you could try your creative design ideas. Then it will beacomplete Kuala Lumpur Country Side Tour :))
Thank you so much for your recommendation. I will certainly visit those places next time I am in KL, especially Batik factory!!!
ူပထမဆုံးပုံနဲ့ Macaque မျောက်တွေကို တွေ့ပြီး ပုပ္ပါးကိုတောင် သတိရလိုက် မိတယ်.၊ ၂၇၂ ထစ်ဆိုတော့ ပုပ္ပါးနဲ့ယှဉ်ရင် တက်ပျော်ပါတယ်၊ ဂူထဲမှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမယ့်ပုံပါပဲ...။
ဒါလဲ တစ်မျိုးစီ စိတ်ခံစားမှုပေးနိုင်မှာ သေချာတယ်။
ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရင်း ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားသလို ခံစားရတယ် မမွန်... သိုင်းကျူးဗျား...